STARTIMES : GasyStar, chaîne malagasy 100% manome lanja ny fanatanjahantena sy kolontsaina - ewa.mg
News - STARTIMES : GasyStar, chaîne malagasy 100% manome lanja ny fanatanjahantena sy kolontsaina
Cet article STARTIMES : GasyStar, chaîne malagasy 100% manome lanja ny fanatanjahantena sy kolontsaina est apparu en premier sur déliremadagascar.
L’article STARTIMES : GasyStar, chaîne malagasy 100% manome lanja ny fanatanjahantena sy kolontsaina a été récupéré chez Délire Madagascar.
Nivoaka tamin'ny : 30/04/2021
Noho ny tsy fahampian-drano: hihena hatramin’ny 60 % ny vokatra katsaka
Ratsy ny vokatra katsaka, araka ny nambaran’ny teknisianina mahafehy izany tsara. Antony, noho ny tsy fahampian’ny orana. Betsaka ireo voly tsy vanona, tsy ny katsaka ihany, mahafaty antoka mpamboly maro. Hihena betsaka ny katsaka amin’izao fotoana fiakaran’ny vokatra izao, noho ny tsy fahampian-drano. Raha misy 170 000 t isan-taona eo ho eo, tombanana ho latsaka hatramin’ny 60 % izany, na 68 000 t sisa antenaina raha betsaka, araka ny fanazavan’ny teknisianina iray amin’ny fambolena any Atsimo Andrefana. Niainga avy amin’ny fanadihadiana ny toetr’andro, ny fahasimban’ny tany volena, ny masomboly lafo, ny tombana natao amin’ny faritra rehetra malaza amin’ny voly katsaka: Atsimo Andrefana, afovoany andrefana, sy afoavoan-tany.Miantoka ny fiveloman’ny olona maro, indrindra ireo mpamboly madinika misy 700 000. Ankoatra ny vary, foto-tsakafo iray ny katsaka, mitovitovy amin’ny mangahazo. Samy manana ny fomba fanjifana azy, arakaraka ny faritra, lena na maina. Sakafom-biby fiompy amin’ny endriny maro, amin’ny ankapobeny, vokatra voahodina atao provandy. Ilain’ny indostria momba ny fambolena koa ny katsaka, toy ny Star, mampiasa azy ho akora fototra fanaovana labiera.Fidiram-bola hafa ny masomboly, avy any amin’ireo mpivarotra izany manokana, na avy amin’ny foibe mpikaroka momba ny fambolena (Fifamanor, Fofifa). Ao koa ireo tantsaha manomana izany mialoha mitahiry ampaham-bokatra miakatra ho masomboly amin’ny taom-pambolena manaraka.Toy ny vary, mila fanavaozana sy fampiharana teknika vaovao ny voly katsaka; mila fanitarana ny velaran-tany, miampy fitaovana, fotodrafitrasa, sns. Na izany aza, miankina betsaka amin’ny rotsak’orana ny voly, mihena hatrany ny vokatra raha tsy ampy ny rano. Miankina amin’ny fanajana ny tontolo iainana izay firindran’ny toetr’andro izay. R.MathieuL’article Noho ny tsy fahampian-drano: hihena hatramin’ny 60 % ny vokatra katsaka a été récupéré chez Newsmada.
Fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC: tomombana 80% ny fanontana ny taratasim-panadinana
Efa tomombana hatrany amin’ny 80% ny fanontana ny taratasim-panadinana ho an’ny BEPC eny amin’ny Cnapmad, raha ny tatitry ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Fantatra izany nandritra ny fidinana ifotony nataon’ny ekipan’ny minisitera notarihin’ny tale misahana ny fanadinana sy ny fanamarihana Andrianarisoa Tinaina Edinah, ny alarobia teo.Nanome toky ny tompon’andraikitra fa tsy maintsy tonga ara-potoana eny anivon’ireny ivon-toeram-panadinana manerana ny Nosy ireny ny taratasim-panadinana, na ny ho an’ny CEPE na ny ho an’ny BEPC. Ny faritany izay lavitra no anaterana izany voalohany ary mamarana azy ny faritanin’Antananarivo.Marihina fa tsy misy fiovana ny datim-panadinana, ny CEPE, amin’ny talata faha 06 jolay ary ny BEPC ny faha 19 hatramin’ny faha 22 ny volana jolay. Miisa 546 365 ireo mpiadina voasoratra anarana amin’ny fanadinam-panjakana CEPE. Nitombo 3% izany raha oharina tamin’ny taom-pianarana lasa ka 27 770 avy amin’ny sekolim-panjakana ary 11 320 ireo avy amin’ny sekoly tsy miankina manerana ny Nosy.Tsy nitsahatra nanentana ireo ray aman-drenin’ny mpianatra ihany koa ny tompon’andraikitra amin’ny fanaraha-maso ny fanomanana ny fanadinana. Toy izany ireo mpianatra mba hilofo hatrany amin’ny fianarana.Nanome toky ihany koa ny minisitera fa tsy misy ahina ny fiarovana ireo laza adina ireo satria misy ny fiaraha-miasa matotra amin’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka ary ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena.Ttaiana AL’article Fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC: tomombana 80% ny fanontana ny taratasim-panadinana a été récupéré chez Newsmada.
Andréas Claude : L’ancien ministre de l’Agriculture n’est plus
Le monde de l’économie perd l’une de ses plus grandes figures. Andréas Claude, connu notamment pour avoir été ministre de l’Agriculture et directeur général de la Soavoanio, a tiré sa révérence. Il s’est éteint, hier, à l’âge de 74 ans. Actif notamment dans la filière vanille et le tourisme, Andréas Claude était aussi le propriétaire de l’hôtel Las Palmas à Sambava. Cet homme d’affaires, d’une simplicité exemplaire a, en tout cas, beaucoup œuvré pour le secteur privé, aussi bien sur le plan national que dans sa région SAVA. Il fait partie des fondateurs du groupement des entreprises de la SAVA et était secrétaire général du Groupement National des Exportateurs de Vanille (GNEV). R.Edmond. L’article Andréas Claude : L’ancien ministre de l’Agriculture n’est plus est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Andréas Claude : L’ancien ministre de l’Agriculture n’est plus a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nandray solontena avy amin’ny masoivoho vahiny roa ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, omaly teny Ambohidahy. Anisan’izany ny masoivoho frantsay, i Christophe Bouchard, izay nanamafy ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta ho an’ny lafiny fahasalamam-bahoaka. Taorian’izay, ny maisovohon’i Maroc Mohamed Benjilani no noraisin’ny minisitra. Niresaka momba ny fiaraha-miasa eo amin’ny HJRA sy ny Hopitaly Avicenne ao Rabat ny roa tonta. Eo koa ny fanampiana fanafody isan-karazany sy ny asa fanorenana efa natomboka ao Antsirabe.Miomana amin’ny fandraisana mpianatra sy ny fiatrehana sahady ny fanadinana BEPC ny sekoly ao amin’ny Cisco Arivonimamo. Nanapa-kevitra ny CRCO any an-toerana fa tsy maintsy fendrahina fanafody avokoa ny sekoly hanaovana ny fanadinana BEPC ny 21 septambra ho avy izao. Tsy maintsy fendrahina fanafody avokoa ny sekoly rehetra na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana vao miditra mianatra ny mpianatra ary atao isaky ny faran’ny herinandro izany. Entanina hatrany ny ankizy amin’ny fanajana ny fepetra rehetra ara-pahasalamanaL’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
Hentitra ny filankevitry ny minisitra: « Nitory ny fanjakana ary haverina eto ilay volamena 73 kg…”
Anisan’ny nivoitra tao amin’ny filankevitry ny minisitra, omaly, teny Iavoloha ny momba ilay volamena maherin’ny 73 kg. “Nitory ny fanjakana tamin’ny fanondranana izany an-tsokosoko any ivelany. Tsy maintsy atao ny fomba rehetra hamerenana io volamena io ao amin’ny Banky foibe. Hiroso tsy ho ela ny fitsarana eo anivon’ny Pac”, hoy ny tatitra. Nohamafisina tamin’izany fa hohenjehina sy iharan’ny sazy ireo rehetra mikasa hanelanelana na hisakana amin’ny fanatanterahana izany fampodiana azy izany an-tanindrazana. “Tsy maintsy ampiharina ny lalàna. Hijoro tsy ho ela ny “Agence de recouvrement des avoirs illicites”… Hisy ny fiaraha-miasa amin’ny lafiny rehetra amin’ny fitondrana Afrikanina Tatsimo », hoy ihany ny tatitra. Tsiahivina fa niato nanomboka ny oktobra 2020 ny fanondranana vatosoa sy volamena.Anisan’ny nambaran’ny filoha koa ny tokony hiasana haingana. Anisan’ny hafainganina ny fanamboaran-dalana, « tramway », ny angovo nohavaozina, ny rano fisotro. “Tsy maintsy atomboka amin’ity volana ity ny dingana amin’ny “Tanamasoandro”, hoy ny filoha.Synèse R. L’article Hentitra ny filankevitry ny minisitra: « Nitory ny fanjakana ary haverina eto ilay volamena 73 kg…” a été récupéré chez Newsmada.
Fanatsarana fomba fiasa: hokirakiraina amin’ny nomerika ny fitsarana
“Inona no tokony hatao ho an’ireo lehiben’ny fitsarana rehetra mba hahazoana manampy azy ireo amin’ny fivoaran’ny haitao? Misy rindrambaiko maromaro, efa ampiasain’ny minisiteran’ny Fitsarana amin’izao” hoy ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fitsarana, Raby Ainarmanga avatsara, tany Mahajanga.Voalohany amin’izany rindrambaiko (logiciel) izany ny momba raharaha ara-barotra amin’ny fanatanterahan’ny mpitsara ny asany. Misy izany Antananarivo, fa ezahina haparitaka manerana ny Nosy. Efa misy koa rindrambaiko ikirakirana an’ireo raharaha ady heloka rehetra. Anisan’ny misitraka izany ny any Mahajanga sy Antsiranana.Manana ny rindrambaiko natokana ho azy koa ny fitsarana amin’ny ady atao amin’ny fanjakana sy ny fitsarana ara-bola.Nifampizara tamin’izao atrikasa izao ireo lehiben’ny fitsarana rehetra ho fanatsarana sy ny tokony mbola hatao eo anivon’ny minisitera amin’ny fivoaran’ny haitao. Hitarika ny mpitsara rehetra mba hanaraka ny volavolan-tetikasan’ny minisitera izany izy ireo.“Tsy afa-miala amin’ny fivoaran’ny haitao isika. Ohatra ny tambajotran-tserasera sosialy, lasa toy ny lapam-pitsarana indraindray”, hoy izy .R.Nd.L’article Fanatsarana fomba fiasa: hokirakiraina amin’ny nomerika ny fitsarana a été récupéré chez Newsmada.
Nahazo ny Prix Nobel de la paix ny Pam
Nosafidian’ny Firenena mikambana hahazo ny prix Nobel de la paix, tamin’ity taona ity, ny Fandaharanasa iraisam-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo na ny Pam. Anisan’ny nanomezana azy izany loka goavana izany ny ezaka lehibe vitany. Tao ny fanampiana sy fanohanana ara-tsakafo ireo mponina marefo, indrindra any amin’ireo firenena misy krizy ara-tsakafo, tao anatin’ny valanaretina covid-19 nivaivay, nandritra ny enim-bolana teo iny.Miantsehatra indrindra amin’ny fanohanana ara-tsakafo any amin’ireo firenena lazoin’ny krizy vokatry ny ady lavareny ihany koa ny Pam ka mendrika ny hotolorana izany Prix Nobel de la Paix izany, raha ny sivana nataon’ny Firenena mikambana.Miantsehatra amin’ireo firenena 80 ahitana tsy fanjarian-tsakafo sy ady ny Pam ary anisan’ny manampy betsaka amin’ny ady amin’ny hanoanana amin’ireo firenena ireo.Marihina fa 300 mahery ireo nandray anjara ho isan’ny hofantenana mba hahazo ity Prix Nobel de La Paix ity, saingy ny Pam no voasafidy. Hatramin’izay, olon-tokana no nisalotra izany, tamin’ity taona ity kosa vao nahazo izany ny fikambanana.Tatiana AL’article Nahazo ny Prix Nobel de la paix ny Pam a été récupéré chez Newsmada.
Famokarana “puce” 50 000 isan-taona: ho voaro amin’ny “puce” manoloana ny asan-dahalo ireo omby
Notokanana, omaly, ny orinasa Genus technology company (GTC), tantanin’ny tanora malagasy. Misehatra amin’ny famokarana fitaovana toy ny “puce” ampiasaina amin’ny sehatra rehetra izy ireo. Tafiditra ao anatin’izany ny fiarovana ny biby, toy ny omby amin’ny asan-dahalo na koa GTC. Tsy voatery ho amin’izany ihany fa azo itadiavana toerana na tsena sy ny maro hafa izany “puce” izany. Mamokatra izany 50 000 isan-taona ny GTC ary efa nahomby ny nampiasana izany tamin’ny fahaverezana omby tany Tsiroanomandidy ny taona 2015. “Azo hampiasaina hatramin’ny fitaterana izany… Tafiditra amin’ny tetikasan’ny filoham-pirenena sady fanomezan-tanana ny fandraharahana izany”, hoy ny avy eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika, Andriamananoro Augustin.Synèse R. L’article Famokarana “puce” 50 000 isan-taona: ho voaro amin’ny “puce” manoloana ny asan-dahalo ireo omby a été récupéré chez Newsmada.